မြန်မာ, 18 ဒီဇင်ဘာ 2017
18 ဒီဇင်ဘာ 2017 တနင်္လာ
ပိတ်ထားတာ ၁ နှစ်ကျော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံ- မိုင်းလားလမ်းကို ပြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့ ပြည်နယ်အစိုးရက တပ်မတော်နဲ့ညှိနှိုင်းနေပါတယ်။ တနှစ်ကျော်ကြာပိတ်ထားခဲ့တာကြောင့် နယ်စပ်ဒေသကုန်သွယ်ရေးကျဆင်းခဲ့သလို ဒေသတွင်း ကုန်သည်တွေလည်း အခက်တွေ့နေတဲ့အတွက် ပြည်နယ်အစိုးရက လမ်းပြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနဲ့ EDM အနုပညာဖျော်ဖြေပွဲများ
နိုင်ငံတကာရေစီးကြောင်းဖြစ်လာတဲ့ အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာတွေအသုံးပြုပြီး မြူးကြွတဲ့ DJ တီးလုံးတွေ ရောစပ်တီထွင်ဖန်တီးတဲ့ EDM အနုပညာဖျော်ဖြေပွဲတွေ မြန်မာလူငယ်ထုအတွင်း အလျှင်အမြန်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာနေပါတယ်။ AFP သတင်းဆောင်းပါးအခြေခံပြီး မအင်ကြင်းနိုင် တင်ဆက်ထားပါတယ်။
သတင်းအကျဉ်းချုပ် ၁၂. ၁၈. ၂၀၁၇
အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump ရဲ့ သမ္မတရာထူးလွှဲပြောင်းရေးအဖွဲ့ဆီကနေ သောင်းနဲ့ချီတဲ့အီးမေလ်းတွေကို အထူးစုံစမ်းရေးမှူး Robert Muller က တရားမ၀င်စုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့ သမ္မတရဲ့ရှေ့နေတွေကစွပ်စွဲ၊
ဒီကနေ့ ကျရောက်တဲ့ ကရင် နှစ်သစ်ကူးနေ့မှာ ကရင်တိုင်းရင်းသား တစ်မျိုးသားလုံး မေတ္တာတရား ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုများနဲ့ ကရင်ပြည်နယ်ကြီး အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဆက်လက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ကြပါစေကြောင်း နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆုမွန်တောင်းပေး သလို ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်လာတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနှစ်သစ်ကူး မိန့်ခွန်းပြောကြားပါတယ်။
ပြည်ပရောက် ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ဆင်နွှဲ
ဒီကနေ့ပြာသိုလဆန်း (၁)ရက် တနင်္လာနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့အခါသမယ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လိုအပ်နေတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိဖို့ပြည်ပရောက် ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေ တညီတညွတ်တည်း တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားနေ့ကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာ ရာဂဏန်းရှိတဲ့ အလုပ်သမားတွေက ချီတက်လမ်းလျောက်ပွဲနဲ့ အခမ်းအနားတွေကို ဒီဇင်ဘာလ၁၇ ရက်နေ့မှာ မဲဆောက်မြို့မှာ လုပ်ခဲ့ကြသလို မြန်မာနိုင်ငံက သန်းနဲ့ ချီရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာနေရပ်ကိုမပြန်နိုင်ကြပဲ ထိုင်းနို်င်ငံမှာဆက်လက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသလိုအလုပ်သမားတွေ ၀င်ရောက်မူတွေက ဆက်ပြီး ရှိနေတယ်လို့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကဆိုပါတယ်။
ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ရိုက်တာသတင်းဌာနက သတင်းထောက်နှစ်ဦး ကို မိသားစုရော ရှေ့နေပါ အခုချိန်အထိ တွေ့ခွင့်မရသေးတဲ့အပေါ် သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေး သတင်းသမားတွေဘက်က စိုးရိမ်တကြီးဖြစ်နေကြပါတယ်။ အခုလို နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဖောက်ဖျက်မှုဥပဒေနဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာလည်း ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကို သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့တွေဘက်က ထုတ်ပြန်နေကြပါတယ်။